OTU ESI EME IHE NGOSI N'ỊNTANET - ỌRỤ NTANETỊ - 2019
Ime ihe ngosi n'Ịntanet
Ebumnuche nke ngosi ọ bụla bụ iji nweta ozi dị mkpa maka ndị na-ege ntị. Site na ngwanrọ pụrụ iche, ị nwere ike ịmekọ ihe ahụ na slides ma nyefee ha ndị nwere mmasị. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ọrụ nke mmemme pụrụ iche, bịa enyemaka nke ọrụ ịntanetị iji mepụta ihe dị otú ahụ. Nhọrọ ndị e gosipụtara na isiokwu ahụ bụ n'efu ma ndị ọrụ site na Intaneti niile kwenyelarịrị.
Mepụta ngosi online
Ọrụ ndị dị n'Ịntanet na arụmọrụ iji mepụta ngosi abụghị ihe na-achọsi ike karịa software agbanyeghị. N'otu oge ahụ, ha nwere ngwá ọrụ buru ibu buru ibu ma nwee ike idozi nsogbu nke ịmepụta eserese dị mfe.
Usoro 1: PowerPoint Online
Nke a bụ ma eleghị anya ụzọ kachasị ewu ewu iji mepụta ngosi na-enweghị ngwanrọ. Microsoft na-elekọta oke kachasị yiri PowerPoint na ọrụ a n'ịntanetị. OneDrive na-enye gị ohere ịmekọrịta ihe oyiyi eji rụọ ọrụ na kọmputa gị ma dozie ihe ngosi ahụ na PaverPoint zuru ezu. A ga-echekwa data echekwara na nchebe igwe ojii a.
Gaa na Online PowerPoint
Mgbe ị na-agagharị na saịtị ahụ, nhọrọ maka ịhọrọ ụdị template dị njikere mepee. Họrọ nhọrọ kachasị amasị gị ma pịa bọtịnụ òké aka ya.
Mpaghara nchịkwa gosipụtara ngwaọrụ nke ọrụ na ngosi ahụ. O yiri nke ahụ e wuru n'ime usoro zuru ezu, ma nweekwa otu ọrụ ahụ.
Họrọ taabụ "Tinye". Lee ịnwere ike ịgbakwunye ihe ngosi ọhụrụ maka edezi ma tinye ihe n'ime ngosi.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike iji ihe osise, ihe atụ na onu ogugu mee ka icho mma gi. Enwere ike itinye ihe ọmụma site na iji ngwá ọrụ ahụ "Ndenye" ma hazie okpokoro.
Tinye nọmba achọrọ nke ọhụụ ọhụrụ site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Tinye slide" n'otu taabụ.
Họrọ nhazi nke slide a gbakwunyere ma kwado mgbakwunye site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Tinye slide".
E gosipụtara ihe nkiri niile na kọlụm ekpe. Ha na-edezi ha mgbe ị na-ahọrọ otu n'ime ha site na ịpị bọtịnụ òké aka ekpe.
Dejupụta ihe ngosi ahụ na ihe ọmụma dị mkpa na ịhazi ya dị ka ị chọrọ.
Tupu ịchekwaa, anyị na-akwado ikiri ngosi ngosi ahụ. N'ezie, ị nwere ike ijide n'aka ọdịnaya nke ihe ngosi ahụ, mana na nyochaa ị nwere ike ileba anya na nsụgharị mgbanwe dị n'etiti ibe. Mepee tab "Lee" ma gbanwee usoro edozi ka "Ọgụgụ Ihe".
Na nhazi ihuenyo, ịnwere ike ịgba ọsọ Ihe ngosi mmịfe ma ọ bụ gbanwee slides na akụ na keyboard.
Iji chekwaa mmechara ihe ngosi gaa na taabụ "Njikwa" na n'elu akara panel.
Pịa ihe "Download dị ka" wee họrọ otu nhọrọ ntanetịime faịlụ.
Usoro 2: Ngosipụta Google
Ụzọ dị ukwuu isi mepụta ihe ngosi na-enwe ike ịmekọrịta ọrụ na ha, Google mepụtara. Ị nwere ohere ịmepụta ma dezie ihe, gbanwee ha site na Google gaa na PowerPoint usoro na vice versa. Site n'enyemaka nke Chromecast, enwere ike ịmepụta ngosi ahụ n'ekwentị ọ bụla, na-eji ngwaọrụ mkpanaka dabere na gam akporo os ma ọ bụ iOS.
Gaa na Ngosipụta Google
Mgbe ntughari gaa na saịtị ahụ, gbadaa azụ ahịa - mepụta ihe ngosi ọhụrụ. Iji mee nke a, pịa akara ngosi ahụ «+» na ala aka nri ala nke ihuenyo.
Gbanwee aha nke okwu gị site na ịpị kọlụm. "Nkọwapụtaghị Akwụkwọ".
Họrọ otu ụdị ejiji dị njikere site na ndị e nyere na kọlụm aka nri nke saịtị ahụ. Ọ bụrụ na ọ nweghị nhọrọ ịchọrọ, ịnwere ike bulite isiokwu gị site na ịpị bọtịnụ "Ebube Mbido" na njedebe nke ndepụta.
Ịnwere ike ịgbakwunye slide ọhụrụ site na ịga na taabụ "Tinye"wee pịa ihe "New Slide".
Enwelarịrị ịme ihe nkiri slide nwere ike ịhọrọ, dịka na usoro mbụ, na kọlụm ekpe.
Meghee ihuenyo iji hụ ihe ngosi egosiri. Iji mee nke a, pịa "Lelee" na ngwaọrụ kachasị elu.
Ihe dị ịrịba ama, ọrụ a na-enye gị ohere ilele okwu gị n'ụdị ị ga-edozi ya na ndị na-ege ntị. N'adịghị ka ọrụ gara aga, Google Presentation mepee ihe ahụ na ihuenyo zuru ezu ma nwee ngwaọrụ ndị ọzọ maka ịkọwapụta ihe na ihuenyo, dị ka igwe-eji ọkụ laser.
Iji chekwaa ihe aghara agwụ, ị ghaghị ịga na taabụ ahụ "Njikwa"họrọ ihe "Download dị ka" ma dezie usoro kwesịrị ekwesị. O kwere omume ịchekwa ma ngosi ahụ n'ozuzu ya na ụdị slide dị ugbu a na JPG ma ọ bụ PNG.
Usoro 3: Canva
Nke a bụ ọrụ ntanetị nwere ọtụtụ ọnụọgụ dị njikere maka mmejuputa echiche echiche gị. Na mgbakwunye na mmemme, ị nwere ike ịmepụta eserese maka netwọk mmekọrịta, akwụkwọ akụkọ, ndabere na ihe osise dị na Facebook na Instagram. Zọpụta ọrụ gị na kọmputa ma ọ bụ ịkekọrịta ya na ndị enyi gị na Ịntanetị. Ọbụna na iji ọrụ ahụ na-enweghị ihe ọ bụla, ị nwere ohere ịmepụta otu ọrụ ma rụọ ọrụ ọnụ na ọrụ, ịkekọrịta echiche na faịlụ.
Gaa na ọrụ Canva
Gaa na saịtị ma pịa bọtịnụ ahụ. "Nbanye" na nri elu nke ibe.
Banye. Iji mee nke a, họrọ otu n'ime ụzọ iji banye na saịtị ma ọ bụ mepụta akaụntụ ọhụrụ site na itinye adreesị ozi-e.
Mepụta imepụta ohuru site na ịpị bọtịnụ ukwu. Mepụta Kere na menu na ekpe.
Họrọ ụdị akwụkwọ edoro. Ebe ọ bụ na anyị ga-emepụta ihe ngosi, họrọ ebe kwesịrị ekwesị na aha "Ngosi".
A ga-enye gị ndepụta nke ndebiri free emere maka ngosi ihe ngosi. Họrọ ọkacha mmasị gị site n'ịgagharị site na nhọrọ niile dị na kọlụm ekpe. Mgbe ịhọrọ otu n'ime nhọrọ ndị ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ otú ibe ndị ga-abịa n'ihu ga-ele anya na ihe ị nwere ike ịgbanwe n'ime ha.
Gbanwee ihe ngosi ahụ maka onwe gị. Iji mee nke a, họrọ otu n'ime ibe ndị ahụ ma dezie ya na ntụgharị uche gị, na-etinye akụkụ dị iche iche nke ọrụ ahụ nyere.
Ịgbakwunye ihe ngosi ọhụrụ na ngosi ahụ nwere ike site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Tinye ibe" n'okpuru ala.
Mgbe i mechara jiri akwụkwọ ahụ rụọ ọrụ, budata ya na kọmputa gị. Iji mee nke a, na top menu nke saịtị, họrọ "Download".
Họrọ usoro kwesịrị ekwesị nke faịlụ dị n'ihu, debe igbe nlele dị mkpa na ihe ndị ọzọ dị mkpa ma gosi nbudata site na ịpị bọtịnụ ahụ "Download" ugbua na ala nke windo nke gosiputara.
Usoro 4: Zoho Docs
Nke a bụ ngwá ọrụ nke oge a maka ịmepụta ihe ngosi, ijikọta ohere nke imekọ ọrụ ọnụ na otu ọrụ site na ngwaọrụ dị iche iche na otu setịpụrụ nke ndebiri ejikere. Ọrụ a na-enye gị ohere ịmepụta ọ bụghị naanị ihe ngosi, kamakwa akwụkwọ dịgasị iche iche, ụyọkọ, na ihe ndị ọzọ.
Gaa na Zoho Docs
Iji rụọ ọrụ a na-achọ ndebanye aha. Iji mee ka ọ dị mfe, ị nwere ike ịgafe usoro ikikere iji Google, Facebook, Office 365 na Yahoo.
Mgbe anyị nwechara ikike, anyị na-arụ ọrụ: mepụta akwụkwọ ọhụrụ site na ịpị akara na kọlụm ekpe "Mepụta", họrọ ụdị akwụkwọ - "Ngosi".
Tinye aha maka okwu gị, kọwaa ya na igbe kwesịrị ekwesị.
Họrọ nhazi nke ederede nke akwukwo di n'ihu site na ihe ndi enyere.
N'aka aka nri ị ga-ahụ nkọwa nke nhazi ahụ, yana ngwaọrụ maka ịgbanwe agbanwe na palette. Gbanwee atụmatụ agba nke ụdị tempụ ahọrọ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Tinye ọnụ ọgụgụ achọrọ nke slides na iji bọtịnụ "+ Ntugharị".
Gbanwee nhazi nke ọhụụ ọ bụla na nke kwesịrị ekwesị site na ịmepe nhọrọ nhọrọ wee họrọ ihe ahụ "Dezie nhazi".
Iji chekwaa mmechara ihe ngosi gaa na taabụ "Njikwa"wee gaa "Mbupụ dị ka" ma họrọ usoro faịlụ kwesịrị ekwesị.
N'ikpeazụ, tinye aha nke faịlụ ebudatara na ngosi.
Anyị na-ele anya ọrụ anọ kachasị n'ịntanetị. Dị ka ihe atụ, ụfọdụ n'ime ha, dịka ọmụmaatụ, PowerPoint Online, bụ nanị ntakịrị dị ala karịa nsụgharị software ha na ndepụta nke atụmatụ. N'ikpeazụ, saịtị ndị a bara ezigbo uru ma ọbụnakwa nwee uru karịa usoro mmemme zuru ezu: ikike iji rụọ ọrụ ọnụ, mekọrịta faịlụ na ígwé ojii, na ọtụtụ ndị ọzọ.